बनाम फिन्टरमाइन: मुख्य भिन्नता र समानताहरू - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय कल्याण समुदाय, कम्पनी कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी प्रेस कम्पनी, औषधि जानकारी
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> बनाम Ptertermine: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
बनाम Ptertermine: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
प्रत्येक वर्ष मोटोपनाले धेरै व्यक्तिलाई असर गरिरहेको छ, वजन उपचारमा मद्दत गर्न विभिन्न उपचार विकल्पहरू उपलब्ध भएका छन्। Contrave (naltrexone / bupropion) र फिन्टरमाइन दुई औषधी हो जुन एक कम क्यालोरी आहार र व्यायाम पथ प्रयोग गरी वजन घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। जे होस् दुबै औषधीको समान प्रभावकारिता छ, ती फरक तरीकाले काम गर्दछन्।
कन्ट्राभ भनेको नल्ट्रेक्सोन र बुप्रोपियनको संयोजनको ब्रान्ड नाम हो। नलट्रेक्सोनलाई ओपियोइड विरोधीका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ जबकि बुप्रोपियनलाई एमिनोकेटोन एन्टिप्रेसप्रेसन्ट मानिन्छ। यो body० किलोग्राम / m2 को शुरुवात बडी मास इंडेक्स (BMI) वा कम्तिमा २ kg किलोग्राम / m2 को लागी अर्को हालतमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, वा उच्च कोलेस्ट्रॉलको साथ सिफारिस गरिएको हो।
कन्ट्राभ केवल एक प्रिस्क्रिप्शनको साथ ब्रान्ड औषधीको रूपमा उपलब्ध छ। यो एक विस्तारित-रिलीज मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा लिन्छ जुन mg मिलीग्राम / 90 ० मिलीग्राम नाल्ट्रेक्सोन / बुप्रोपियनको शक्तिको साथ हुन्छ। खुराक प्राय: हप्ताको चार हप्तामा दुई पटक दुई ट्याब्लेटमा दैनिक दुई ट्याब्लेटमा सुरू गरेर धेरै हप्ताहरूमा बिस्तारै वृद्धि हुन्छ।
braggs स्याउ साइडर सिरका को लाभ के हो
फेन्टरमाइन (फेन्टरमाइन विवरणहरू) यसको ब्रान्ड नाम, एडिपेक्स-पी द्वारा चिनिन्छ। यो केन्द्रीय स्नायु प्रणाली र भूख दमनकारी प्रभावको साथ एक sympathomimetic को रूप मा काम गर्दछ। फेन्टरमाइन 30० किलोग्राम / m2 वा २ kg किलोग्राम / m2 को साथ अर्को वजन-सम्बन्धित comorbidity को साथ बीएमआई भएकाहरूमा मोटोपनाको उपचारका लागि पनि प्रभावकारी छ।
फेन्टरमाइन जेनेरिक मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा 37 37..5 मिलीग्रामको बलको साथ उपलब्ध छ। यो १ 15 मिग्रि, mg० मिलीग्राम, वा .5 37..5 मिलीग्राम मौखिक क्याप्सूलको रूपमा पनि आउँदछ। Phentermine अक्सर बिहान एक पटक डाक्टरको निर्देशनमा आधारित लिन्छ। सामान्यतया केहि हप्ता भन्दा बढी लिनको लागि सिफारिश गरिदैन।
मेरो a1c 5.6 हो यसको मतलब के हो
बनाम Phentermine छेउ तुलना दायरा तुलना
कन्ट्राभ र फेन्टरमाइन उनीहरूको आफ्नै अनुपम गुणहरूको साथ फरक औषधी हो। तिनीहरूको समानता र भिन्नता तल तुलना तालिकामा फेला पार्न सकिन्छ।
Phentermine मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Phentermine मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
xanax लाई हिट गर्न कति समय लाग्छ
अन्य जोखिम कारक (उच्च रक्तचाप, मधुमेह, hyperlipidemia) को साथ अधिक वजन
ओपिओइड विरोधी / एमिनोकेटोन संयोजन
स्वादको बदलिएको भाव
कामवासना परिवर्तन गरियो
कुनै जेनेरिक हाल उपलब्ध छैन
फेन्टरमाइन जेनेरिक नाम हो।
प्रति १२० ट्याबलेटमा 8 8 .8
30 per० प्रति tablets० ट्याबलेटहरू
मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधकर्ताहरू (सेगिलिन, फेनेलजीन, आइसोकारबॉक्सिड, आदि)
CYP2B6 अवरोधकर्ताहरू (क्लोपीडोग्रल, टिकलोपिडिन, आदि)
CYP2B6 inducers (lopinavir, efavirenz, आदि)
मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक औषधिहरू (glyburide, glimepiride, sitagliptin, pioglitazone, acarbose, इत्यादि)
एड्रेनर्जिक न्यूरन ब्लक गर्ने ड्रग्स (भण्डार, ग्वान्टीडाइन, आदि)
कन्ट्राभ गर्भावस्था कोटि X मा छ र गर्भवती महिलालाई प्रशासित गर्दा भ्रुण हानी हुन सक्छ। गर्भवती महिलाहरूमा कन्ट्राभ सिफारिस गरिदैन।
Phentermine गर्भावस्था कोटि X मा छ र गर्भवती महिला को प्रशासित जब भ्रूण हानी हुन सक्छ। गर्भवती महिलाहरूमा फिन्टरमाइन सिफारिस गरिदैन।
Contrave (naltrexone / bupropion) र फिन्टरमाइन दुई औषधी हो जुन मोटाईको उपचार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। जबकि कन्ट्राभ ओपियोइड विरोधी र एन्टिडिप्रेसन्टको मिश्रण हो, फेन्टरमाइनले सिम्पाथोमेटिकको रूपमा केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। दुबै औषधिहरू मात्र एक उचित आहार र व्यायाम आहारको साथ सिफारिस गरिन्छ।
Contrave चार हप्ता वा अधिक लामो अवधि को उपयोग को लागी अनुमोदित छ। अर्कोतर्फ, फिन्टरमाइन केही हप्ताको छोटो अवधिमा प्रयोगको लागि सिफारिश गरिन्छ। कन्टेभ अक्सर दिनको एक पटक भन्दा धेरै लिईन्छ जबकि फेन्टरमाइन प्राय: बिहान एक पटक लिन्छ।
कन्ट्राभलाई वजन घटाउनका साथै ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्ट्रोलको स्तर सुधार गर्न देखाइएको छ। किनकि बुप्रोपियन प्राय जसो एन्टिडेप्रेसन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यसले मोटोपना र डिप्रेसन भएकाहरूलाई पनि मद्दत गर्न सक्छ। औषधि का उल्लेखनीय साइड इफेक्टमा मतली र कब्ज शामिल छ।
फिन्टरमाइनले तौल घटाउन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ जबकि यसले केहि अनावश्यक साइड इफेक्टहरू जस्तै उच्च रक्तचाप र सुख्खा मुख उत्पादन गर्न सक्छ। त्यसकारण, मुटुसँग सम्बन्धित परिस्थिति भएका व्यक्तिहरूमा यो प्राथमिकता पाउन सकिन्न।
दुबै औषधीहरू डाक्टरले उचित मूल्या after्कन गरेपछि मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ। उनीहरूको सम्भावित साइड इफेक्ट र औषधि अन्तर्क्रियाको कारणले, कुन औषधी अधिक उपयुक्त हुन सक्छ भनेर निर्धारण गर्न समग्र चिकित्सा ईतिहासको समीक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन तथ्या 20्क २०२१
कोभिड को एक हल्का मामला कस्तो लाग्छ
काउन्टर खोकी suppressant औषधि भन्दा राम्रो
एक साँच्चै खराब ह्या hang्गओभर को लागी के गर्ने
के मतली संग मद्दत गर्न को लागी
कसरी एक मानिस एक खमीर संक्रमण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
त्यहाँ फ्लू को कति प्रकार छन्